Fa maninona i Luz de Maria de Bonilla? - Countdown ho an'ny Fanjakana
Taorian'ny taona nandaozany ny sitrapon'Andrimanitra dia nanomboka niharan'ny fanaintainana teo amin'ny hazo fijaliana i Luz de María, izay entiny ao amin'ny vatany sy ny fanahiny. Nitranga izany voalohany, nizara izy, tamin'ny Zoma Taona: “Nanontany ahy ny Tompontsika raha te handray anjara amin'ny fijaliany aho. Namaly tamim-pahatokiana aho, ary taorian'izay ny vavaka mitohy mitohy, tamin'io alina io, dia niseho tamiko teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy ary nizara ny feriny. Ny fanaintainana tsy hay lazaina, na dia fantatro aza fa na dia mampahory ihany izany, tsy ny fitombon'ny fanaintainana izay itohizan'i Kristy mijaly amin'ny maha-olombelona. ”
Hafatra avy ao amin'ny Luz de Maria de Bonilla
Luz - Manomana ny Ady lehibe fahatelo ny firenena
Eto aho hiaro anao, fa tokony hiala amin'ny ratsy ianao.
Luz - Rivers of confuse
Aza miandry famantarana fa eo afovoanao ireo.
Luz - Ilay zavona matevina
Niely nanerana ny zanak'olombelona ny ratsy.
Luz de Maria - Manaova fanonerana anio
Aza mijanona ho passif.
Luz de Maria - Aza miandry
Voafidy ny Reny Masiko.
Luz de Maria - Manomana anao aho
... ho an'izay mijanona eo am-bavahady.
Luz de Maria -Miha haingana ny fanadiovana ny zanak'olombelona
Miomàna! Izay hitranga dia zakan'ny olona bebe kokoa raha mitoetra ao amin'Andriamanitra izy ...
Luz de Maria amin'ny microchip ...
Luz de Maria: Famoronana manohitra ny olona ny famoronana
Ka hiverina amin'Andriamanitra Andriamanitra io lehilahy io ary hanaiky Azy.
Luz de Maria - Mivoaka ny maha-olombelona nefa tsy fantany ireo famantarana
Mamorona hetsika vaovao ny Fitiavana Trinite
Luz de Maria - Ny fotoana dia "Ankehitriny"!
Miomàna amin'ny fihoarana goavana.
Luz de Maria - Raiso ny andraikitrao amin'ny fahotanao
Luz de Maria - Aza matahotra, na dia miery aza ny ratsy
Tsy lazaiko aminareo ny momba ny fiafaran'izao tontolo izao, fa ny fanadiovana ity taranaka ity.
Luz de Maria - Be Love
Tokony ho fantatra amin'ny zanako lahy marina ny fitiavan'ny Zanako.
Luz de Maria - Ny devoly dia niditra an-tsokosoko tamin'ny fiangonana
Hitanareo amin'izao fotoana izao nambara mialoha: ny fahatanterahan'ny fanambarana.
Luz de Maria - Mijanona amin'ny fanairana ara-panahy
Ny areti-mandringana sy ny areti-mifindra ary ny pandemika, izay tsy mahavoa ny vatana fotsiny fa ny fanahy koa, tsy hijanona.
Luz de Maria - Miaina ao anatin'ny fanisana ianao
... amin'ny fihaonanao amin'ny zavatra nofitako ho an'ny olombelona.
Luz de Maria - Mihetsika ny Dragon
Ilaina ny hanaiky ny Reniko ho renin'ny maha-olombelona, ​​Co-redemptrix ary Mediatrix ny hatsaram-panahy rehetra.
Luz de Maria - Tsy handao anao mihitsy Jesosy
Ny olony dia toy ny ondry tsy misy mpiandry.
Luz de Maria - Ny Virus dia Prelude fotsiny
Ny vahoakan'Andriamanitra dia tonga any Getsemane.
Luz de Maria - Ondry eo afovoan'i Wolves
Tompontsika amin'ny 13 Jona 2020: Ry Malala: Tohizo amin'ny lalan'ny fiovam-po. Mijanona ao anatin'ny fitiavako, ...
Luz de Maria - Universe in Chaos
Mahareta, aza mandray tsotra fotsiny ny tenin'ny Lanitra.
Luz de Maria - Tsy hihemotra ny fitsapana
Luz de Maria - valiny
Moa ve ny "manam-pahefana ara-pahasalamana mihoatra an'Andriamanitra"?
Luz de Maria - Mirongatra ny hadalan'olombelona
Ny ady izao dia mitarika ho amin'ny ady lehibe iray.
Luz de Maria - Ekeo ny famantarana ny vanim-potoana!
Tohero ny "onjan-kevitra" ...
Luz de Maria - Akaiky ny fampitandremana
Mivavaha, satria ny lalàn'ny famindram-poko dia akaikin'ny maha-olombelona ...
Torohevitra momba ny fanasitranana omena. Ireto ambany ireto misy hafatra mivaingana momba ireo aretina hitranga amin'ny ...
Luz de Maria - Fanapahana amin'ny alàlan'ny tahotra
Ny tetikady Masonika dia nomanina mba hifehezana ny olombelona amin'ny tahotra.
Luz de Maria - Ity no fotoana tsy misy fotoana
Io no fotoana tsy misy ...
Sokajy avy amin'ny Romanina Ritual ho an'ny fitsoahana ny sira sy ny rano
(Ny akanjo ny mpisorona amin'ny fandroana sy lamba volomparasy. Ny pretra rehetra dia afaka milaza an'io fitahiana io.) P: Ny fanampiantsika dia ao anatin'ny ...
Miady amin'ny viriosy sy aretina…
Azafady mba tadidio mba hoentinao miaraka aminao ny fepetra fitandremana ara-pitsaboana sy ara-tsiansa rehetra mba hiarovana ny tenanao tsy hiatrika ...
Voam-boalobom-bary mahafinaritra ho an'ny vanim-potoana mosary
Torohevitra amin'ny voaloham-boaloboka, tantely, ary voanjo, nomena. Jesosy Kristy Tompontsika: 27 Oktobra 2014 "Tsy mahafoy aho ...
Luz de Maria de Bonilla - Mivavaha hanohitra ny viriosy
Andriamatoa ho an'ny, 15 martsa 2020: Zanaka malala ao amin'ny foko tsy milay: mitso-drano anao aho amin'izao fotoana izao rehefa misy olombelona ...
Luz de Maria de Bonilla - Manadio Volkano
Md Michael Arkanjely ho an'ny: Ankizy, ny olona dia ho gaga amin'ny fahatezeran'ny volkano izay mbola tsy fantatra. Ho avy indray ny lehilahy ...
Posted in Messages, Fa inona no mpahita?.
← Fa maninona no Valeria Copponi?
Fa maninona i Simona sy i Angela? →